Once Upon A Time - Nabi🍃🌹 - Wattpad
91 Reads 12 Votes3Part Story
By ZiLiXing12 Ongoing - Updated Apr 01, 2017
firelightchanbaekexo Mar 28, 2017
Be My Galaxy!!
4.6K 541 47
3.7K 379 61
Boy    ×    Boy
Chan  ×    Baek
Spurious = Artifical
24.3K 1.8K 89
သဘာဝတရားကြီးကို ဆန့်​ကျင့်​လို့ အပြစ်​​ပေးခံရမယ်​ဆိုလျှင်​....
အဲ့ဒီအပြစ်​ကို ရဲရဲကြီး ခံယူလိုက်​ချင်​ပါတယ်​။
19.6K 1.8K 161
Lucky Girl for EXO
2.2K 229 49
Lucky girl for EXO ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးမှာတော့ EXO ကိုအရမ်းကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကံကြမာ၏ ဆန်းကျယ်မှုတွေထဲမှာ EXO နဲ့ ဘယ်လိုတွေ့ဆုံပြီး EXO member ဖြစ်တဲ့ Chanyeol နဲ့ ဘယ်လို ချစ်ကြိုက်ပြီး မနာလိုသူတွေကလဲ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ .
19.6K 1.5K 116
မတည်မြဲသော လောကတွင် ထာဝရဆိုသောစကားတစ်ရပ်သည် အသုံးမဝင်သလိုပင်
သို့သော် ကျွန်မ၏အိပ်မက်အတွက်တော့ အလွန်ပင်အဖိုးထိုက်တန်သောစကားတစ်ရပ်
ထာဝရမက်ချင်ခဲ့သော အိပ်မက်အား ထိုသူကမက်စေခဲ့သည်
သို့သော် ထိုသူကပဲ ထာဝရအိပ်မက်မှ ပြန်နိုးထစေခဲ့သည် ဤသည်ကား ကျွန်မ၏အိပ်မက်တစ်ခု
[ Yearning Gas ]《 Completed 》
41.2K 4.5K 410
( OH SEHUN × KIMJONGIN )
SOMEONE HAS MANY NUMBERS BUT ANOTHER ONE KEPT THE NO.1 IN HIS HEART.
Horror fic​လေး တစ်​ပုဒ်​ပါ အား​ပေးကြပါဦး​နော်​ ​အတတ်​နိုင်​ဆုံး​ကြောက်​စရာ​ကောင်း​အောင်​​ရေးသားပါ့မယ်​ ​ဝေဖန်​​ပေးကြပါ
ဒီ fic​လေးထဲမှာ Exo oppaတို့အားလုံးရယ်​ ​နောက်​ မိန်းက​လေး သုံးယောက်​ပါပါတယ်​ authorက yaoiမ​ရေးတတ်​လို့ပါ
Author ကိုယ်​တိုင်​က hun biasပါ အားလုံးက ဘယ်​မိန်းက​လေးနဲ့မှတွဲတာ မကြိုက်​မှန်းသိပါတယ်​ ဒါ​ကြောင့်​ reader​တွေ ကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပြီး ခံစားနိုင်​​အောင်​ ​ရေးထားတဲ့ နာမည​တွေကလဲ authorရဲ့ စိတ်​ကူးယဉ်​နာမည်​​တွေပါ
ဒီ fic​လေးကို အား​ပေး ​ဝေဖန်​ အကြံပြု​ပေးကြပါ readerတို့...